सचिवालय बैठक ४ बजे , आज होला त छिनोफानो ? - नेपालबहस
सचिवालय बैठक ४ बजे , आज होला त छिनोफानो ?
| १२:१७:५८ मा प्रकाशित
२० बैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको देशमा अप्रत्याशित रुपमा आइलागेको राजनीतिक संकट कसरी साम्य होला ? धेरैको चासो र जिज्ञासाको विषय बनेको छ । आज बेलुकी ४ बजेका लागि तय भएको नेकपा सचिवालय बैठकले यो अन्योलको छिनोफानो गर्ने झिनो आशा भएको मान्नेहरु पनि धेरै छन् ।
आजको बैठक निर्णायक हुने धारणा प्रधानमन्त्री केपी ओली विरोधी पक्षको रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री पक्षधर नेताहरु भने समस्या हल गर्ने प्रस्थान विन्दू आजको बैठक हुने तर्क गर्छन् । गत बुधबार भएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कोरोना महामारीपछि प्रधानमन्त्री र नेता माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेर सबैलाई जिल्याएका थिए ।
उक्त प्रस्तावबाट बामदेव पुलकित भएका थिए भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव सशंकित । ओलीले साँच्चै समाधान दिने गरी प्रस्ताव गरेको भए आज ठोस प्रस्ताव आउने नेताद्वयले निकटस्थहरुसँग बताएका छन् । साथै आजको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर दुबै पक्ष आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पक्षको भेला र बैठक बालुवाटारमा भइरहेको छ । ओलीलाई सघाउन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का शंकर पोखरेल केही दिनयता राजधानीमा सक्रिय छन् । त्यसैगरी रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिब विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मध्यमार्ग खोज्ने प्रयत्नमा लागेका छन् ।
उता, ओलीलाई यसपाला घुँडा टेकाई छाड्ने पक्षमा दृढ देखिएका प्रचण्ड–माधव समूह पनि गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् । हिजो दिनभरि नै यो पक्षको भेला र छलफल जारी रह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेलगत्तै प्रचण्ड कोटेश्वरस्थित माधवको घर पुगे । त्यहाँ भेला भएका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, रघुजी पन्त लगायत नेताले ओलीको चालमा नफस्न नेताहरुलाई खबरदारी गरिरहे ।
सचिवालय बैठकमा ओलीले अलमल्याउने प्रस्ताव ल्याए सहमति नजनाउन र स्थायी कमिटीको माग नछाड्न सुझाए । साथै माधव नेपाललाई तेस्रो हैसियतको अध्यक्ष पद नस्वीकार्न पनि आग्रह गरियो । छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपामा बहुअध्यक्ष प्रणाली लामो समय नराख्न भन्दै सकेसम्मा सहज तरिकाले माधव कम्रेडलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन उपयुक्त हुने राय प्रकट गरे । तर बामदेवलाई इमान्दारीपूर्वक प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वासिलो प्रस्ताव आयो भने सहयोग गनुपर्ने तर्क पनि उनले राखेका थिए ।
उता, यो प्रकरणको केन्द्रमा रहेका बामदेव भने आज बेलुकी ओलीले ठोस प्रस्ताव ल्याउने विश्वास गरेका छन् । सार्वजनिक रुपमा केही नबोले पनि बामदेव हिजो दिनभरि निकट कानून व्यावसायीसँग छलफलमा रहे । कुन प्रक्रियाबाट जाँदा प्रधानमन्त्री बन्न सहज हुन्छ भन्ने नै बामदेवको मुख्य चासो थियो । धेरै कानून व्यावसायीले राष्ट्रियसभामा गएर संविधान संशोधन गर्दा मात्र सहज ढंगले प्रधानमन्त्री बन्न सकिने राय दिए ।
तर बामदेव निकट नेताहरु भने यो सबै अल्मल्याउने चाला मात्र भएको ठान्छन् । बामदेव निकट नेता बलराम बाँस्कोटाका अनुसार, नियम कानून र परम्परा विपरित बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हैन बरु बदनाम गराउने प्रपञ्च मात्र हो । यस्तो प्रस्तावको पक्षमा लाग्दा धोका हुन सक्ने भन्दै उनले बामदेवलाई त्यसमा नअल्मिलिन सुझाव दिएको बताए । यो सबै तर्क बितर्कको छिनोफानो भने आजैको बैठकले गर्ने पनि उनले विश्वास गरेका छन् ।
अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह शुभारम्भ समारोह ११ घण्टा पहिले
विश्वरभरका गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न ओलीको आग्रह १९ घण्टा पहिले
मिथिलाञ्चलमा आज लोकपर्व जुडशीतल मनाइँदै १३ घण्टा पहिले
आइसिटी पुरस्कारका लागि आवेदन दिन सञ्चार मन्त्रालयको सूचना ८ घण्टा पहिले
आठ महिनामा जुम्लामा १९ करोड राजश्व सङ्कलन १२ घण्टा पहिले
निजामती विधेयकविरुद्ध सिंहदरवार भित्रै विरोध प्रर्दशन,चार कर्मचारी पक्राउ १३ घण्टा पहिले
मकवानपुरको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण शुरु ८ घण्टा पहिले
प्राविधिक शिक्षा दिई रोजगार प्रदान गर्नु आजको प्राथमिकता ६ दिन पहिले
भानुभक्त प्राणी उद्यानमा चरा अवलोकन १० घण्टा पहिले
तपाईको आजको राशिफल कस्तो छ ? ३ दिन पहिले
रोशनी र उज्वलको अभिनयमा रुन त धेरै रोए १२ घण्टा पहिले
रुसी खोप “स्पुतनिक भी” प्रयोगका लागि भारतको अनुमति ३ दिन पहिले
सूर्योदय र सारथी नेपाल लघुवित्तको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन २ हप्ता पहिले
कृषि कर्ममा रमाउँदै म्याग्देली १ हप्ता पहिले
पाकिस्तानमा प्रतिबन्धको अवज्ञा गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने २ हप्ता पहिले
स्मार्टडोकोले ल्यायो नयाँ वर्षको अफर, अनलाइन सामान खरिद गर्दा ६६ प्रतिशतसम्म छुट पाइने ११ घण्टा पहिले
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले हकप्रद जारी गर्ने २ हप्ता पहिले
आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, ओलीले दुई वटा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने ४ हप्ता पहिले
किसान भन्दछन् ‘युरिया मल कहिले पाइन्छ ?’ ८ महिना पहिले
खर्बपति क्लबमा प्रवेश गर्नेको आठौं नम्बरमा पर्यो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, अन्य को–को ? २ महिना पहिले
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पतालमा ६ हजार श्यया थप ८ महिना पहिले
लकडाउनपछि सरकारलाई कांग्रेसको १२ बुँदे सुझाव १ वर्ष पहिले